Xubno kudhow 200 Xildhibaan oo la soo xulay & Madaxda DKMG ah oo cambaareyay gudiga Farsamada – SBC
Xubno kudhow 200 Xildhibaan oo la soo xulay & Madaxda DKMG ah oo cambaareyay gudiga Farsamada
Posted by Webmaster on August 17, 2012 Comments
Gudiga soo xulista Xunaba ka mid noqon doona Baarlamanka dowlada Soomaaliya ayaa maanta ku sheegay in ay soo xuleen oo ay diyaar yihiin xubno ka badan 190 qof kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamanka Cusub ee lagu wado in ay yeelato dowlada cusub ee Soomaaliya.
Inkastoo ay jiraan xubno ay soo xuleen odayaasha dhaqanka oo ay dib u celiyeen gudigan farsamada ayaa hadana waxaa soconaya hadalo kasoo kala baxaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo Madaxda DKMG ah ee Soomaaliya.
Madaxda Sar sare ee Xukuumada Siiba madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed ayaa ka mid ah siyaasiyiinta Dooda ka qaba qaabka loo xulayo baarlamanka Cusub.
Kulan maanta ka dhacay Xarunta Madaxtooyada ay wada qabteen Madaxweynaha iyo Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay ku cambaareeyeen go’aanka gudiga farsamada sooxulitaanka xubnaha Baarlamanka ay dib ugu celiyeen kudhowaad 50 xubnood oo loo soo gudbiyay.
Madaxweynaha oo kulan saxaafadeedka ka hadlayay ayaa sheegay in aan loo baahneyn sida ay u dhaqmayaan gudiga farsamada aysanna awood u laheyn in ay dadkii ay doonaan celiyaan ayna xubnahani soo xuleen odayaasha dhaqanka.
Xubnaha la celiyay ayaa gudiga farsamada u tiigsadeen qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay ka soo mid ahaayeen xubnahaasi qabqablayaashii dalka iyo kuwo horay dembi uga soo galay dalka waasida wararku qorayaane, balse taasi waxaa ka soo horjeestay madaxweyne shariif oo ku sheegay in xitaa qabqablayaashi dalka horay looga sixiixay in aysan dib ugu laaban doonin howlihii ay ku jireen oo ayna xilal waaweyn ka soo qabteen dowladihii soomaray dalka oo ay tiisu ugu dambeysay.
Sikasta oo ay xaaladu ahaataba waxaa haray maalmo kooban oo 3 ah xiligii loo qabtay in ay ku dhacdo doorashada Baarlamanka iyo Madaxweynaha Dalka, mana muuqato saan saan lagu qeexi karo in ay qabsoomi doonto maadaama ay inagu soo wajahantahay Munaasabada Maalinta Ciida oo la filayo in beri ama saadambe noqoto, balse gudiga farsamada ayaa ku rajo weyn in ay suurto gal noqon karto qabsoomida doorashooyinkaasi.